Facebook kee gaafa duute dhaalchisuuf - Barataa Technologies - Giddu Gala barnootaa fi Odeeffannoo
Namni kamuu jireenya yeroo qofa adunyaa tana irra jiraata. Gaafa guyyaan xumuraa dhufe biyya lafaa tana dhiisee gara adunyaa biraatti godaana. Gaafa lubbuun jiru wanta horate(qabeenya) fira yookiin aantee isaa dhaalchisee darba. Qabeenyota namni tokko horatu keessaa tokko facebook dha. Facebookiinis akkuma qabeenyota biro fira yookiin aantee yookiin namni ati barbaadde kamiifiiyyuu gaafa ati duute dhaalamuu ni danda’a.
Gaafa namni tokko du’e dhaabbanni facebook, akkaawuntiin facebook nama du’ee sana fira nama du’een yookiin qaama abbaan du’e sun naaf haa dhaaluu jedhee dhaamateen akka dhaalamu taha. Kana gochuun kan danda’amu, namni tokko osoo hin du’in dura nama eenyummeessaa isaa gaafa inni du’u, nama yookiin qaama isa dhaaluu danda’u yoo facebook beeksise qofa.
Namni tokko nama eenyummeessaa isaa kan facebook dhaaluu danda’u tokko, dhaabbata facebook beeksisuudhaaf tartiiba armaan gadii hordofuu qaba. Haala armaan gadii Kanaan nama eenyummeessa keenya dhaalu danda’u uumachuu dandeenya.
Jalqaba gara toora facebook kankee seenuu qabda
Itti aansuudhaan setting->personal information kan jedhu irratti cuqaasi
Manage account->legacy contact kan jedhu bani
Choose legacy contact kan jedhu irratti cuqaasuudhaan nama yookiin fira eenyumeessaa kee gaafa ati duute dhaaluu danda’u filatta
Namni facebook kee dhaale kun maal fa’a raawwachuu danda’a?
Namni facebook kee dhaale, gaafa ati duute wantoota kanneen raawwachuu nama danda’uudha.
Ergaa yookiin dhaamsa xumuraa nama siif barreessuu ni danda’a
Maxxansoota kee ilaaluu ni danda’a. yoo eegumsi isaanii only me tahanis
Gaafii hiriyummaa gara garaaf deebii kennuu ni danda’a
Ergaalee ati namaaf barreesite dubbisuu hin danda’u
Suuraa kee siif geeddaruu ni danda’a
Ergaa haaraa namaaf katabuu hin danda’u
Walumaagalatti gabaabinaan namni account kee dhaalu tokko wantoota armaan olii kanneenii fi kanneen biro raawwachuu ni danda’a jechuudha.